क्लानमा खेलाडीलाई कसरी निम्तो दिने?
पुरातन समयमा देखि, मानिसहरू समूहमा थप प्रभावकारी ढंगले कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न एकत्रित छन्। त्यसो भए पछि केहि पनि परिवर्तन भएको छैन, र अब धेरै थोरै व्यक्तिले आफैंले काम गर्दछ - सबै सँग सम्बन्धित फन्टहरू: व्यापार, शैक्षिक, खेलकुद र खेल पनि। धेरै मानिसहरू कम्प्यूटर खेल खेल्न समय बिताउन चाहन्छन्, तर तिनीहरू तथ्यलाई मन पराउँदैनन् कि सबै त्यहाँ जीवित छैन। यसकारण, यस्ता व्यक्ति साथीहरूसँग एकताबद्ध हुन्छन् र सहकारी मोडमा खेल्छन्। तर यो केवल आउटपुट मध्ये एक हो - केही कम्प्यूटर गेमहरूले बहुविध मोडल प्रस्ताव गर्दछ जसले तपाईंलाई धेरै मानिसहरू प्ले गर्न दिन्छ। तथापि, यो प्रायः सबै भन्दा ठूलो मल्टीप्लेयर खेल हेर्न को लागी छ, जसको लोकप्रियता शून्यको शुरुवातमा बढ्न थाले र अझै पनि घट्दैन। कसैले यो सोच्न सक्छ कि यी खेलहरू अरूबाट अलग छैनन्, र त्यो बिल्कुल गलत हुनेछ। किन? मल्टी मल्टीप्लेयर खेलहरू बीच के फरक छ? क्यान्सर के हुन्? क्यान्सरलाई साथीलाई कसरी निमन्त्रणा दिने? वा क्लैनमा कसरी सामेल हुन सक्छ? यदि तपाईं यस शैलीसँग परिचित हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग यी सबै र अन्य प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ पाउनेछ। तर यदि तपाई भर्खरै एक परिचय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ केहि उपयोगी जानकारी सिक्न सक्नुहुन्छ।
एक मित्र वा कुनै प्रयोगकर्तालाई क्लेनलाई कसरी निमन्त्रणा दिने विशेष ध्यान दिनु पर्छ, तर यसलाई थोडा पछि पछि छलफल गरिनेछ। पहिलो तपाइँ विस्तार मा बुझ्न आवश्यक छ कि एक विशाल मल्टीप्लेयर गेम के हो र कुनै अन्य खेल को multiplayer मोड देखि यसको के फरक छ। त्यसैले, सबै भन्दा पहिले यो ध्यान दिन योग्य छ कि एमएमओ-खेलहरू अलग-अलग परियोजनाहरू हुन्, जुन सामूहिक बहुविधका लागि विशेष रूपमा सिर्जना गरिन्छ। त्यहाँ कुनै स्पष्ट रूप देखि व्यक्त गरिएको साजिश छैन, तर त्यहाँ एक विशाल संसार हो जुन त्यहाँ विभिन्न राक्षसहरूको एक विशाल संख्या छ जसको साथ तपाईं आफ्नो चरित्र पंप गर्न र उसलाई शक्तिशाली हतियार र गुणस्तरको चीजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ठूलो मल्टीप्लेयर खेलहरूको भ्रामक विशेषताहरू मध्ये एक कोपनमा सामेल हुने मौका हो। यो अलग बारेमा कुरा गर्ने लायक छ। तपाईं साथीहरू कसरी साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्न, कसरी क्लिन्सनमा कसरी सामेल गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न र कसरी निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न खेलहरूमा, यो विभिन्न तरिकामा गरिन्छ, तर यो सिद्धान्त लगभग सबै ठाँउमा छ।
MMO खेलहरूमा क्लान्स
त्यसोभए, यो एक क्यान्सरको साथ सुरु गर्न लायक छ, र त्यसपछि यो अधिक विशेष प्रश्नहरू मा पुग्न सम्भव हुन सक्दछ - एक क्यान्टिसन कसरी गर्ने, कसरी अर्को खेलाडीले क्लानमा निमन्त्रणा गर्न र त्यसमा। यस शब्दको अर्थ के हो? एक ठूलो मल्टीप्लेयर खेलमा, प्रत्येक खेलाडी आफैले जिम्मेवार छ - उसले राक्षसहरू घुमाउँछ, चरित्रको कौशलमा सुधार गर्दछ, अन्य क्यारेक्टरहरूसँग डुङ्गा गर्ने व्यवस्था गर्दछ। सामान्यतया, उहाँ एक्लै यात्रा गर्नुहुन्छ, र त्यसो भए सबै कुरा। तथापि, क्ल्यानको अस्तित्व दिईयो, तपाईं सँग अर्को परिदृश्य छ। तपाईं एक क्लैंजमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ वा आफैले एक सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। तदनुसार, एमएमओ खेलहरूमा क्लानले खेलाडीहरूको एक समुदाय हो जुन आम लक्ष्यहरू पछ्याउँदछ, एकअर्कालाई सहयोग गर्दछ, संयुक्त यात्राहरू र त्यसमा। एक क्यान्सरमा खेलाडी कसरी निमन्त्रणा गर्ने भन्ने जान्न धेरै महत्वपूर्ण छ, तर यो आवश्यक छ किन यो आवश्यक छ कि यो महत्त्वपूर्ण छ।
अवचेतन स्तरमा, सबैले बुझ्दछन् कि एकै साथमा धेरै रमाइलो, सजिलो, अधिक कुशल र त्यस्ता हुन्छन्। तर के वास्तवमा क्यान्सन अनलाइनमा राम्रो छन्? चाँडै तपाईं क्यान्सरमा खेलाडी कसरी निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ तर तपाईलाई यो ज्ञान चाहिन्छ? त्यसोभए, यो स्पष्ट भए जस्तै, क्याननले मानिसहरूको समुदाय हो जुन यस्तै लक्ष्यहरू पछ्याउँछ। प्रायः तिनीहरू क्यारेक्टरको स्तरमा आधारित छनौट गर्नुहोस्, यदि तिनीहरू एक-अर्कासँग परिचित छैनन् - केवल आफूलाई बलियो बनाउन भर्ना गर्न। तर यदि यी अनुकूलन लिङ्कहरू छन् भने, एक बलियो कलकले कमजोर खेलाडी लिन सक्छ - थप अनुभवी खेलाडीले नयाँ कामदारलाई मदत गर्नेछन्, र लाभ पनि क्लिनको लागि हुनेछ - शुरुवात एक शक्तिशाली योद्धा र सहयोगीले बढ्न सक्छ। प्रायजसो क्लान्टहरूले अभियानहरूबाट राक्षसहरू र भेटिएका चीजहरूको बिक्रीबाट छुटकारा पाउँछन्, विभिन्न कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्दछ र त्यसमा। यसैले, यो तथ्यलाई ध्यान दिनको लागि सार्थक हो कि क्यान्सर व्यवसायमा प्रवेश गर्दा सामूहिक मल्टीप्लेयर गेमहरू धेरै रमाइलो र रोमाञ्चक हुन्छन्। र अब यो क्लैन (मेन्निफ्ट, विश्व टैंक, विश्व विश्वकप र यति) को मित्रहरु र अनुभवी योद्धाहरुलाई कसरी निम्तो दिने भनेर पत्ता लगाउने समय हो।
क्यान्सरमा प्रवेश गर्नुहोस्
क्यानन सामेल गर्ने प्रक्रियामा कति गाह्रो हुन्छ तपाइँ कसरी राम्रो खेल्नुहुन्छ, संस्थापक वा क्यान्सरका साथ परिचित, र केहि अन्य कारकहरूमा पनि निर्भर गर्दछ। क्लानमा सामेल हुन, तपाईंले साबित गर्न आवश्यक छ कि तपाईं सदस्यताको योग्य हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ खेलाडीले प्रसोधनमा लिन्छन्, कहिलेकाँही उनीहरु केहि समयको लागि मात्र हेर्छन्, र यो अनुभव हुन्छ कि अनुभवी युद्धकर्मीहरू आफ्नो योग्यताको आधारमा स्वीकार्य हुन्छन्। र आफ्नो स्तर उच्च, तपाईं क्याननमा स्वीकार गरिनेछ भन्ने अधिक सम्भावना। यदि तपाईंको स्तर पर्याप्त छैन भने, तपाइँ केवल एक कमजोर र सानो क्यानन दावी गर्न सक्नुहुनेछ। तर यस अवस्थामा यो सम्झना हो कि एक पटक सबै भन्दा पहिले नै शीर्ष स्तरको क्लिनिक पनि सानो भयो। वैसे, केही क्लैंजहरूले आफ्नै स्वयंको भलाइको अरूलाई आमन्त्रित गर्न मनाउँदैनन् - यो गम्भीर निगरानी गर्न सकिन्छ। तर यस अवस्थामा क्यान्सरलाई कसरी मित्रलाई निमन्त्रणा दिने?
आफ्नो आफ्नै क्यान्सर सिर्जना गर्दै
यो हुन सक्छ कि तपाईं कुनै अवस्थित कन्सहरू मन पराउनुहुन्न, र त्यसो भए तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं आफ्नो भाग्य कोसिस गर्नुहोस् र आफ्नै आफ्नै क्यान्सन बनाउन सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईं सबैलाई कल गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। स्वाभाविक रूपले, एक कमजोर क्यान्सनमा सामेल भन्दा पहिले यो विकल्प पनि कम प्रभावकारी छ, किनभने तपाईंको क्यान्सन ठूलो बजेट छैन, त्यहाँ कुनै मान्यता हुनेछैन, र केवल निम्न-स्तरका खेलाडीहरू यो सामेल हुनेछन्। तर चुनौती सार्थक हुनेछ, त्यसैले एक कबीले एक रोचक घटना हो जुन कुनै खेलाडीले प्रयास गर्न सक्दछ। र त्यसपछि त्यहाँ क्लैनलाई आमन्त्रित गर्ने बारे कुनै प्रश्न हुनेछैन। "टैंक", "डट" वा अन्य कुनै खेलमा निमन्त्रणाको आफ्नै योजनाहरू छन्, तर तिनीहरू सबै एक सामान्य सिद्धान्तले एकताबद्ध छन् - नेतृत्वसँग सम्पूर्ण विशेषाधिकारहरू छन्। र यदि तपाईं क्यानडाको नेता हुनुहुन्छ भने, तपाईले समस्याहरु बिना मित्रहरूलाई निम्तो दिन सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए, तपाइँले कुन सामूहिक मल्टीप्लेयर गेमहरू सिक्नुभयो, पत्ता लगाउनुभयो कि कसरी एक क्लान कसरी गर्ने, कसरी विभिन्न गेमहरूमा सिर्जना गर्न सकिन्छ, जस्तै Warcraft वा Minecraft, कसरी अन्य खेलाडीहरूलाई क्लानमा निमन्त्रणा दिन सक्नुहुन्छ। यो योगफल बनी रहन्छ र कुन क्यान्सरहरू र विपक्षहरू छन् पत्ता लगाउँछन्। सकारात्मक विशेषताहरु मा लगातार पारस्परिक सहयोग, एक साधारण बजेट, प्रशिक्षण शुरुवात - सामान्य मा, एक सामूहिक भावना जसले खेल धेरै अधिक प्रभावकारी बनाउँछ, र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण, मजा र उत्साह समावेश गर्दछ।
वास्तवमा, क्लानहरू धेरै कमजोरीहरू छैनन्, विशेष गरी जब ठूलो र शक्तिशाली गठबन्धनको बारेमा कुरा गर्छ। यस मामला मा एकमात्र कमी आजादी को एक संभावित प्रतिबंध बोला जा सकता छ - तपाईंलाई मुख्य रूप देखि क्लैन को लाभ को लागी कार्य गर्नेछ र त तपाईंको अच्छे को लागि। खैर, यदि तपाईं स्वयं एक क्यान्सर व्यवस्थित वा सानो क्यान्सरमा सामेल हुनुभयो भने, तपाईंले यसको पदोन्नतिमा थुप्रै समस्याहरू सामना गर्न सक्नुहुनेछ।
डोटा 2-ग्रिड "लाइफेलरर: टैंकको हत्यारे।" जीवन शैलीको लागि कसरी "DotA 2" v 6.81 प्ले गर्न
"Maincraft": लांचर सुरु हुँदैन, मैले के गर्नु पर्छ?
"माइनकाफ्ट" मा सुरुवातकर्ता: तपाईलाई नयाँ खेलाडी थाहा पाउने सबै कुरा
टैंकको संसारमा कसरी छिटो स्विंग गर्ने
सम्पत्ति अधिकार अदालतहरुमा मार्फत को पहिचान। स्वामित्व कागजातहरू को दर्ता लागि
"छोराछोरीको लागि Panadol" (सिरप) - आमाबाबुको लागि विशेष लिखित निर्देश
एक द्वारा पूछे जाने मा Shawarma: चरण नुस्खा
Casco अनलाइन गणना: लाभदायक र सुविधाजनक!
तुलना बनाम खेल मा GTX 750 NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड GeForce GTX 750 तिवारी